Venezoelà: Fampiroboroboana ny zavakanto tsotra amin’ny alalan’ny bolongana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2010 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Nederlands, Italiano, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, srpski, Español
Any Venezoelà, ny zavakanto tsotra no fomba fanehoana ny fomba fijery mety indrindra ataon'ny fiaraha-monina hanehoany ny hakanton'ny manodidina azy. Araka ny famaritana dia matetika no tsy misy anaran'olona voatonona ho tompon'ireny na niavian'ireny zavakanto tsotra ireny. Ny mpahay tantaran-javakanto Ricardo Ruíz avy amin'ny Anjerimanontolon'i Los Andes [es] dia mametraka ny zavakantso tsotra ho ivelan'ny zavakanto tafiditra amin'ny Dina akademika (izany hoe nianarana) sady heverina matetika ho “bontolo” na “tantsaha” (.pdf ). Amin'ny ankapobeny ny zavakanto tsotra dia faritana ho zavakanton'ny tantsaha, ary matetika heverina ho asa-tanàna vita nialoha ny fahatongavan'ny Espaniola. Tsy nisy fombafomba loatra ny endrika asehony ka iheverana ny zavakantso tsotra ho tsy manandanja noho ny zavakanto nianarana. Saingy noheverin'ny mpanoratra Ruíz kosa fa ny firoborobon'ny zavakantso tsotra, indrindra fa ny any Venezoelà, dia tokony hojerena amin'ny lafiny mampiofo azy sy mampifindrafindra azy ho amin'ny tondrozotra maro araka izay fomba fijerin'ny mpanakanto azy eo amin'ny hatsaram-bika aman-tarehy, tantara, fiainana ary ny fahafatesana. Ary ankehitriny moa dia mivoaka amin'ny aterineto ireo fomba fijery (ny zavakanto no resahina eto) ireo hahatrarany mpiantsena vaovao, izay tsy azon'ny mpanakanto tsotra maro taloha.
Nanangana bolongana iray i Luis Acosta iray amin'ireny mpanakanto tsotra ireny hampiroboroboana ny mpanakanto tsotra hafa ary namoaka ny “Torolalana ho an'ny mpanao asa-tanana [es]” Hita aty amin'ity lahatsary ity [es]ireo asana artista sasany. Hoy i Acosta:
Tsy manana fahalalana amin'ny aterineto ny ankamaroan'ireo mpanakanto ireo mba hahafantarana azy (…) malalaka sy mahaleo tena ity fandraisana an-tanana ity ary ny asam-panolorantena no mamelona azy..
Tetikasa hafa iarahan'i Acosta amin'ny mpanakanto folo hafa ny fampirantian'izy ireo an-tsersera ny asany ao amin'ny Aravaney [es]. Atolotra atoamin'ity lahatsary ity ny vondrona:
Ao amin'ny bolongany manokana [es] kosa i Acosta no mandranty ny asany sy manasongadina ihany koa ny asan'ny mpanakanto sy ny mpanao asa-tanana namany:
Nanoka-tena ho amin'ny famolavolana tanimanga sy ny hosodoko aho hatramin'ny nonenako tany Caracas, tanàna nahaterahako, tamin'ny 1984. hatramin'ny 1993 kosa no nonenako tany Valencia (Venezoelà). Ny endrika fitiavam-bavak'i Venezoelà sy ny endrika mbamin'ny toetra niavaka tamin'ny tantaram-pirenenay no tena nanetsika ahy hanao ireo asam-pamolavolana tanimanga sy hosodoko ireo nandritra ny taona maro (…) Tiako aseho eto amin'ity takelaka ity izany asa vita izany ary hasehoko ihany koa ny asan'ny mpamorona hafa mbamin'ny mpanao zavakanto tsotra eto amin'ny fireneko sy manerana izao tontolo izao.
Omeko anao ny kintana sy ny volana – an'i Luis Acosta ary navoaka rehefa nahazoana alalana.
Manasongadina ny zavakanto tsotra sy ny mpanakantony amin'ny alalan'ny bolongany ihany koa i Elgar Ramírez avy any Caracas. Ao amin'ny bolongany, Artesanía en Tapara [es], no arantiny ny zavakanto vita tamin'ny voa (vihy), hazo ary karazam-boatavo. Voaboasan'i Ramírez ny tanjon'ny bolongana:
…hanondrotra sy hanely ny zavabitan'ny mpanao asa-tanana mahavita zavatra maningana, tsy hay alaina tahaka ary tena kanto natao tamin'ny voanjavatra, hazo, voatavo… ary raha azo atao dia ny hahafahana mifandray mivantana amin'ireo mpanao asa-tanana ireo.
Ity rakitsary ato ity indray dia maneho ny asa-tanan'i Yaritza Molina izay miasa miaraka amin'ny voatavo any amin'ny fokonolon'i Palo Negro, fanjakan'i Aragua.
Mandia lalana mbola tsy nodiaviny taloha ny endrika zavakantso tsotra tahaka itony noho izao fandraisana an-tanana izao. Azon'ny hafa manerana izao tontolo izao noho ny fandroson'ny teknolojia ny tsanganasa izay olona mandalo akaiky ny toerana nanaovana azy ireny ihany no nahita azy teo aloha. Itony izany no iray amin'ny fomba maro ahafahan'ny zavakanto sy ny haitao niasa niaraka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Azo heverina noho izany fa hahazoana tombotsoa ny sehatra tahaka itony hampielezana ny zavakanto sy ny fomba fijery ny tontolo manodidina izay tsy fantatra loatra, nefa tena misy dikany lehibe momba ny fiainana sy ny fahalalana tsy fantatra loatra ivelan'i Venezoelà.